Wararkii ugu dambeeyey weerar culus oo ka dhacay Laascaanood | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Warkii Wararkii ugu dambeeyey weerar culus oo ka dhacay Laascaanood
Wararkii ugu dambeeyey weerar culus oo ka dhacay Laascaanood
Laascaanood (Dalkaan.com) – Wararka laga helayo gobolka Sool ayaa sheegaya in xalay jabhadda hubeysan ee SSC ee uu hoggaamiyo Col. Feysal Falaalug ay weerar ku qaaday gudaha magaalada Laascaanood ee xarunta gobolkaasi oo dhaca waqooyiga dalka.
Weerarka oo dhaxay xilli saq dhexe ah ayaa waxaa xigay iska hor imaad toos ah oo dhexmaray jabhadda iyo sidoo kale ciidamada Somaliland ee ka howl-gala halkaasi.
Ilo deegaanka ah ayaa innoo sheegay inay maqlayeen dhawaqa rasaasta ay is weydaarsanayeen labada dhinac oo ka dhaceysa xaafadaha qaar ee magaalada Laascaanood, waxaana ay intaasi ku dareen inay soo wajahday cabsi aad u xoogan.
Ma cadda khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarkaasi, mana jiro wax war ah oo kasoo baxay dhanka Somaliland.
Dagaalka ayaa markii dambe istaagay, waxaana dib u noqday xoogagii jabhadda SSC ee weerar culus ku qaaday halkaasi.
Xaaladda ayaa saaka deggan, waxaana hadda qeybo ka mid ah magaalada howlgallo ka wada ciidamada Somaliland oo baadi goobaya raggii weerarka kusoo qaaday oo dib u laabtay.
Muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa waxaa gobolka Sool laga dareemayey dhaq-dhaqaaqyo uu ka wado Feysal Falaalug oo si weyn uga soo horjeedo xukuumadda Somaliland, iyada oo xiisadda labada dhinac ay soo taagneyd muddo aad u dheer.
MAXAAD KA OGTAHAY NOLOSHA STRESS KA AAN LAHAYN EE DHABTA AH?
Farmaajo iyo Rooble yaa qaadaya masuuliyadda dhibaatada amni darada Muqdisho ee...
Crystal Palace oo rajo ka qabta inay dhameystirto heshiiska amaahda ee...
Farmaajo ma tagi doonaa Teendhada Afisyooni si uu u tartamo?
Al-Shabaab oo madaafiic ku garaacday Saldhig ay ku sugan yihiin Ciidamada...
Ciidamada Gorgor oo ka hortagay weeraro qaraxyo ah + Sawirro
Barcelona oo u soo bandhigtay Manchester City Heshiis is Dhaafsi oo...
DEG DEG: Xubno ka tirsanaa Al-Shabaab oo lagu toogtay Beledweyne kadib...